Ity fisafidianana kabinetra ao an-trano fidiovana ity dia aza manenina mihitsy mividy azy!
Home / Blog / Ity fisafidianana kabinetra ao an-trano fidiovana ity dia aza manenina mihitsy mividy azy!
2020 / 10 / 11 FisokajianaBlog 1155 0
Raha ny momba ny vata fidiovana, dia fantatsika rehetra toy ny fandroana mahazatra izy io, mitana ny andraikitra mavesatra amin'ny fitehirizana ny fandroana. Mazava ho azy, raha misafidy teny tsara ianao, ny lanjan'ilay fandroana dia mety miankina aminy ihany koa hanatsara ny tanana.
Ka ny fisafidianana ny kabinetra ao amin'ny fandroana dia tsy mety misavoritaka, voalohany indrindra, amin'ny fahafaha-manaony, arahin'akanjo mifanentana amin'ny fomba fanaingoana ny fandroana fandroana iray manontolo, sns.
Ahoana ny fisafidianana kabinetra amin'ny fandroana?
1. Misafidiana Araka ny Rivin'ny Fandroana
Ny kabinetra fandroana no fisehoana manintona indrindra ao amin'ny trano fandroana, azo lazaina fa vokatra an-trano lehibe io mba hanehoana ny hatsarana sy ny tsirony an'ny tompony. Ka ny zavatra voalohany tokony hodinihina rehefa mividy kabinetra fidiovana dia ny fomban'ny kabine ao amin'ny fandroana, dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fomba fandravahana azy ireo an-trano.
Endrika Shinoa vaovao
Ny fomban'ny sinoa vaovao dia tsy kopia tsotra an'ny fomban'ny sinoa, fa fitambaran'ireo singa nentim-paharazana nalaina avy tamin'ny fomban'ny sinoa sy ny maoderina.
Ity fomban'ny kabinetra amin'ny fandroana ity amin'ny ankapobeny dia hazo mafy orina ho fitaovana lehibe, amin'ny endrika tsy hampiasa lamina sarotra sy sarotra, fa hisafidy tsipika geometrika tsotra kokoa. Ny fampiasana ankapobeny ity fomban'ny kabinetra fandroana ity dia hiseho ho tompony kanto kokoa.
Fomban'ny Minimalista maoderina
Ny kabinetra fidiovana maoderina minimalista dia mandinika bebe kokoa ny fahaiza-miasa sy ny hatsarana. Noho izany, ity karazana kabinetra fandroana ity amin'ny ankapobeny dia mampiasa loko maivana amin'ny fisehoan'ny loko, na dia matanjaka be aza ny fitehirizana azy dia azo lazaina ho safidy voalohany ho an'ny tokantrano kely.
Ity fomban'ny kabinetra ity dia malaza indrindra amin'ny ankafizin'ny tanora ankehitriny, noho izy tsotra sy malala-tanana nefa tsy mamoy ny endrika famolavolana, fa miaraka amin'ny ankabeazan'ny lalao an-trano tena mety.
Ny fomba mediteraneanina dia azo lazaina fa tsy manam-paharoa indrindra amin'ny fomba fanaingoana rehetra. Koa satria ny fomba mediteraneanina dia avy amin'ny morontsiraka azure any Espana sy ny morontsiraka fasika fotsy, ny fotsy sy ny manga no tena lokony. Ary ireo loko roa ireo dia afaka mamorona fahatsapana mampitony sy malalaka.
2. Misafidiana mifanaraka amin'ny volavolan-drafitra
Kabinetra fandroana mihantona
Ny kabinetra fandroana mihantona no safidy tsara indrindra ho an'ny ankamaroan'ny trano. Noho ny endriny mihoapampana eo ambany, izay manasaraka ny kabinetra amin'ny gorodona, dia manaparitaka tsara ny hamandoana sy ny hamandoana izy io, ka manakana ny fahafahan'ny hamandoana hanafika ny kabinetra.
Ankoatr'izay dia manana tombony ihany koa izy amin'ny fampitomboana ny fahatsapana habaka. Ka na dia tokantrano kely aza izy io, napetraka miaraka amin'ity kabinetra fidiovana ity miaraka amina andian-kabine fitaratra iray ihany, dia tsy hahatsapa ho feno olona.
Kabinetra mitsangana miorina amin'ny gorodona
Raha ampitahaina amin'ny kabinetra fandroana mihantona, ity karazana kabinetra fidiovana ity dia tsy mila takiana amin'ny rindrina rehefa apetraka.
Na izany aza, satria mando mandritra ny fotoana maharitra ny fandroana. Indrindra raha tsy maina sy tsy mitoka-monina ny trano dia matetika ny vata fidiovana avy amin'ny gorodona no mifampikasoka amin'ny rano, ka miteraka fahasimbana amin'ny kabinetra, misy fiatraikany amin'ny fiainam-panompoana.
Noho izany, rehefa mividy kabinetra fidiovana amin'ny gorodona ianao dia aza hadino ny misafidy takelaka tsy misy fangarony roa amin'ny kabinetra fidiovana, ny fomba tokana ahazoana antoka fa tsy simba ny firafitra anatiny amin'ny kabine fidiovana amin'ny gorodona, mba hanitarana ny androm-piainan'izy ireo.
3.Araka ny fisafidianana ireo fitaovana ho an'ny kabinetra
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana kabinetra hafa any amin'ny fandroana dia ny kabinetra fandroana hazo mafy no azo antoka indrindra amin'ny tontolo iainana sy mahasalama, satria matetika ny fanaka vita amin'ny hazo dia vita avy amin'ny hazo isan-karazany toy ny akora.
Na izany aza, noho ny maha-manokana ny tontolo iainana amin'ny fandroana dia matetika ampiasaina amin'ny fanaovana kabine fidiovana ny hazo fingotra. Ity hazo ity dia voadio sy tsy ampy rano, ary koa ny fizotran'ny famonoana rano mba tsy ho tantera-drano sy hamandoana.
Ny kabinetra amin'ny fandroana vita amin'ity fitaovana ity dia afaka mamorona efitrano fandroana mora foana amin'ny fahatsapana maoderina ary mora diovina. Na izany aza, tsy maintsy mitandrina amin'ny zavatra maranitra ianao mba tsy ho simba ny dondona mandritra ny fampiasana isan'andro.
Ity fitaovana ity dia tena tsara fanoherana anti-slip fanoherana volo, azo lazaina ho fikolokoloana tsara indrindra ny fitaovan'ny kabine fandroana.
Na izany aza, manana fatiantoka ihany koa ny fitaovan'ny PVC: raha mametraka zavatra mavesatra aminy mandritra ny fotoana maharitra ianao dia mora miova endrika, noho izany ny haben'ny ankapobeny amin'ity kabine amin'ny fidiovana ity dia ho kely kely kokoa, mety kokoa ho an'ny fianakaviana telo ampiasaina.
Ahoana no hitazomana ny kabinetra fandroana?
1. Fanadiovana kabinetra ao amin'ny efi-trano
1, ny kabinetra fandroana contra amin'ny rano, mazàna amin'ny lamba mando kely dia azo soloina moramora hisorohana ny harafesin'ny rano.
2, ny detergent tsara indrindra hampiasana fanafody tsy miandany, tsy mahazatra amin'ny paompy ao amin'ny trano fidiovana koa dia vokatra fanadiovana tsara.
3, ny kabinetra fandroana matetika dia apetraka amin'ny savony, mpanadio sy vokatra fanadiovana hafa, ny fikorianan'ny detergent tsy mitandrina no tsara indrindra hamafana avy hatrany (na amin'ireo vokatra fanadiovana etsy ambanin'ny lambam-pandriana).
2 Fanamboarana ny kabinetra fandroana
Lacquer scuffs, tsy mikasika ny loko eo ambanin'ny hazo, misy loko amin'ny kabinetra mitovy crayon na loko, amin'ny kabinetra ny smear manarona ny loko fototra, ary avy eo ny fantsom-bozaka mangarahara dia azo atao sosona.
Torohevitra fampiasana fampiasa isan'andro amin'ny kabinetra 3
1, kabinetra fidiovana amin'ny fikirakirana, tokony hatsangana maivana ary apetraka maivana, aza sintomina mafy; toy ny fitaratra amin'ny kabinetra sy ny fifandraisana amin'ny tany, dia tokony hosaronan'ny fitaovana malefaka, mba tsy ho maratra; ny tany tsy fisaka, tokony ho tongotra mafy pad.
2, ny fametrahana rano ao anaty fantsona ary mankanesa any amin'ny fantson-drano mba hampifandray matevina, ary mila manara-maso tsy tapaka mba hisorohana ny famoahana misy fiantraikany amin'ny kabinetra.
3, dia tsy tokony hampiasa zava-maranitra maranitra hanakorontana ny tampon-kabinetra, mba tsy hiteraka fahasimbana ambonimbony ateraky ny fivoahan'ny rano.
4, hisorohana ny jiro mivantana, hisorohana ny kabinetra tsy ho simba. Ataovy madio foana ny efitrano.
Ny fomba tsy mitovy, ny karazana kabinetra ao amin'ny trano fidiovana dia afaka mitondra traikefa hafa aminao. Ity voalaza etsy ambony ity dia momba ny fisafidianana sy fikojakojana kabinetra fandroana, manantena aho fa hanampy anao io.
Previous :: Manan-tsaina, tsy mifandray, Crossover mandeha amin'ny ankapobeny! Fampisehoana fandroana fandroana marika vaovao an'ny vahiny Next: Ity fisafidianana kabinetra ao an-trano fidiovana ity dia aza manenina mihitsy mividy azy!
Fantatrao ve fa mampihorohoro ny fandroana "maimbo"? Mitadiava ny tsara ...
Fanavaozana ny fitaratra amin'ny fandroana, ny 99% ny olona dia tsy hijery ity antsipirihany ity
Leaky Faucet? Rusty? Mihisatra ve ny rano? Tanana amin'ny fomba fanamboarana azy
Fianakaviana sinoa, tena tsy mendrika fisarahana fahatelo?
2020 / 10 / 17 1011
Ny toro-hevitra fandroana tsara indrindra amin'ny efitra fandroana rehetra, amin'ny toerana iray ihany!
2020 / 10 / 16 1226
4.95m2 Fomba Skandinavianina, Mbola bebe kokoa ny fandroana an'ity mpivady tanora ity ...
2020 / 10 / 15 1031